Xayuubinta Xaquuqda Waalidka | LawHelp Minnesota
Xayuubinta Xaquuqda Waalidka
Termination of Parental Rights (PDF)596.47 KB
Waa maxay macnaha xayuubinta xaquuqda waalidku?
Xayuubinta Xaquuqda Waalidka Macnaheedu waa qofka xaquuqdiisii waalidnimo ayaa laga qaadaa. Qofku markaa wixii ka dambeeya ma aha waalidka sharciga ah ee ilmaha.
Waalidku waxa uu waayi xaqqa booqashada ilmaha.
Waalidku ma uu go’aansan karo sida ilmaha loo korinayo loona xanaanaynayo
Ilmaha korsi qofka kale waa loo siin kartaa iyadoon waalidku golaan
Maxkamadahu waxa ka qaadaan xaquuqda waalidka si ay u ilaaliyaan amaanka ilmaha xaalada aadka u xun ku sugan ee la jooga waalidkooda. Waa wax aad naadir u ah in labada waalid midkood uu bilaabo dacwo si uu uga qaadayo xaquuqda waalidnimada waalidka kale. (Ka eeg arrintan qaybta ugu dambaysa ee warqadan xogta aruursan.
Xayuubintu waxa ay noqon kartaa mid “Ikhtiyaar ah” ama mid “Aan-Ikhtiyaar ahayn
Tan Ikhtiyaarka ah:
Xayuubinta ikhtiyaarka ah macnaheedu waa waxa aad ogolaadatay inaad faraha ka qaado xaquuqdaadii waalidnimo. Waxaa laga yaabaa inaad go’aansatay inaad arrintan sameyso waayo waxa aad is tiri waxa ay maslaxad u tahay adiga iyo ilmahaagaba waxaana jira sabab fiican oo loo sameeynayo. Sida, hadii ilmahaagu uu muddo dheer la joogay qoys loo geeyey, ama sabab ah in qofkii aad horey u wada jirteen uu guursaday qof doonaya inuu ilmaha isagu korsado. Ama waxaa dhici karta in saaxiib ama qof ehel ahi uu ogolaaday inuu la wareego korinta ilmaha.
Ogow: Maxkamadu kuuma ogolaanayso inaad faraha ka qaado xaquuqdaada waalidnimo hadii sababtu tahay inaadan doonayn inaad bixiso masaariifta ilmaha.
Xayuubinta aan ikhtiyaar ka ahayn macnaheedu waa ma aadan ogolayn inaad faraha ka qaado xaquuqdaada waalidnimo, laakiin, si kastaba ha ahaatee ay maxkamadu go’aansato in ay kaa qaado xaquuqdaada waalidnimo.
Hadii maxkamadu ay kaa qaado xaquuqdaada waalidnimo, kaliya ma aad waayneysid xaquuqda waalidnimo ee ilmaha aad hadda haysato. Hadii aad ilmo kale dhasho mustaqbalka, maxkamadu waxa ay oran kartaa iyagana waalid fiican uma aad noqon doontid. Hay’ada Adeega Bulshadu waxa ay codsan kartaa in lagaa xayuubiyo xaquuqdaada durbadiiba kolka ilmahu uu dhasho.
Hadii xaquuqdayda waalidka la iga xayuubiyo, xiriir ma la yeelan karaa ilmaha?
Hadii uu jiro qof doonayo ilmahaaga inuu korsado aadna ogolaato inaad faraha ka qaado xaquuqdaada waalidnimo si hawsha korsigu u hir gasho. Adiga iyo qoyska ilmaha u qaadanaya inay korsadaani waa aad ka wada hadli kartaan aadna go’aansan kartaan hadii adiga ama qof kale oo ehel ah uu booqan karo ama ay iska warqabi karaan ilmaha.
Hadii ilmahaagu uu la joogo qoys ay dowladdu u gaysay, hay’ada ilmaha qoyskaa u gaysay, waa in ay ansaxisaa heshiiska la xiriirka. Waxaa aad ka xareyn heshiiskan maxkamada.
Siddee ayaa xaquuqda Waalidka loo xayuubiyaa?
hadii ay degmaddu hesho warbixin sheegaysa dayac iyo saxariirin, waxa ay sameeyaan baaritaan. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Ilaalinta Ilmaha Child Protection. Iyadoo hadba ku xiran waxa ay soo ogaadaan, ayaa waxaa dhici karta inay u gudbiyaan kiiska xafiiska xeer-ilaaliyaha degmada si uu uga codsado maxkamada waxa la yiraa codsiga (CHIPs). CHIPS waxa ay u taagan tahay “Ilmo u Baahan Ilaalin ama Adeegyo.”
Hadii xafiiska xeer-ilaaliyaha degmaddu uu xareysto codsiga (CHIPs) waxa ay waydiisanayaan maxkamada inay xukunto in ilmahaagu ay yihiin ilmo u baahan ilaalin iyo adeegyo.
Hadii xaakimku uu ku raaco dowlada arjigeeda, qorshe kiis ayaa la sameeyaa. Qorshaha kiisku waxa uu ku siin adiga fursad aad wax uga qabato dhibaatooyinka jira ee ay maxkamadu leedahaay waxa ay u baahan yihiin in wax laga qabto si kolkaa ay ilmahu adiga kuula noolaadaan.
Hadii aadan u hogaansamin qorshaha kiiskaaga ama aadan horukac ka sameyn dhanka wax ka qabadka dhibaatooyinka jira, degmaddu waxaa ay xareyn kartaa kolkaa codsi cusub oo ay maxkamada ku waydiisanayso in lagaa xayuubiyo xaquuqdaada waalid. Marmarka qaarkood, kolka ay jiraan xaaladaha aadka u culusi, degmadu waa ay boodi inay marto habka (CHIPS) waxa ayna xareysan codsiga xayuubinta xaquuqda waalidka. Codsiga lagu codsanayo in lagaa xayuubiyo xaquuqdaada waalidnimo waa khasab inuu ku siiyo sababta sharciga ah ee xayuubinta ka dambaysa. Arrintan waxaa loogu yeeraa “asbaabta” xayuubinta.
Waxaa jira dacwo dhagaysi maxkamadeed. Xilliga dacwo dhagaysiga, xeer-ilaaliyaha degmadu waxa uu isku dayaa inuu cadeeyo inay tahay in xaquuqdaada waalid lagaa xayuubiyo. Xeer-ilaaliyaha waa khasab sidoo kale inuu cadeeyo in degmaddu ay si weyn isugu dayday in ilmahaaga dib gacantaada loogu soo celiyo. Waa khasab inay cadeeyaan waxaa iyadoo soo bandhigaya “daliilo cad oo garan karo.”
Kolka labada dhinacba ay soo bandhigaan daliilahooda, xaakimka ayaa go’aansada in xaquuqdaada waalid lagaa xayuubiyo iyo in kale.
Hadii xaquuqdaada lagaa xayuubiy, waalid kalena uusan jirin, kolkaa degmaddu waxa ay eegi inay hesho qoys ilmahaaga u qaata inay korsadaan iyagu. Hadii ay jiraan dad kale oo ehel ah oo doonaya inay iyagu qaataan ilmaha, dadkaa ehelka ah waxa ay ka xareysan karaan maxkamada waxa la yiraa Arjiga Fara-gelinta Motion to Intervene. Maxkamada ayaa haysa fooomamka ama waxa aad ka heli kartaa iyaga shabakada www.MNcourts.gov iyadoo ku hoos jira “Hel Foomamka” (“Get Forms.”) Riix Ilaalinta Ilmaha “Child Protection.”)
Waa maxay sababaha sharciga ah ee loo cuskado ka xayuubinta xaquuqda waalidka?
Waxaa jira 9 sababood oo sharci ah ama “asbaabo” oo waalidka xaquuqda waalidnimada looga xayuubiyo Minnesota.
1. Cidlayn- Ka soo bixi waaga ka warqabka ilmahaaga ama danayn waaga hagaagsanaantooda muddo 6-bilood ah iyadoo aysan wax sabab fiican ahi aysan jirin.
2. Dayac – hadii aad siin karto waxa ay ilmahaagu u baahan yihiin laakiin aadan siin, kolkaa waa aad dayacaysaa ilmaha. “Baahida” waa waxyaabaha sida cuntada, hoyga, tacliinta, dharka, iyo daryeelo kale si kolkaa ay ilmahu u koraan ayna u noqdaan kuwo caafimaad qaba.
3. Dhaqaale ahaan gargaarid la’aanta – Waxaa jira amar maxkamadeed oo ah masaariifta ilmaha, laakiin ma aadan bixin waxba. Tan macnaheedu ma aha dhowr goor oo aad gaftay inaad bixiso masaariifta ama hadii aadan u bixin karin masaariifta sabab macquul ah awgeed.
4. Waalid aan qumanayn- Waxaa laguu arki karaa in aadan qumanayn hadii habdhaqankaaga ay ka muuqato in aadan awoodi karin ama aadan doonayn inaad daryeesho ilmaha caafimaadkooda jirka, caadifada, ama madaxa.
5. Wax ka qabad la’aanta sababaha dowladdu ilmaha ugu meelaysay dadka kale?
ilmahu waxa ay guriga ka maqnaayeen muddo 12-bilood ah oo ka mid ah 22-bilood ee la soo dhaafay, ama 6-bilood hadii ay ka yar yihiin 8-sanno,
uu jiro qorshe ilmaha guriga dibadiisa lagu meelaynayo oo ay maxkamadi amartay, adiguna aadan u hogaansamayn qorshahaa, ama aadan wax ka qabanayn dhibaatooyinka iyo
adeegyada bulshadu ay isku dayeen inay ka caawiyaan in qoyskaagu dib isugu soo noqdo laakiin ay taasi shaqeyn wayday
6. Waxyeelo xad-dhaaf ah- Ilmaha si xun ayaa wax loo yeelay intii gacantaada ku jireen.
7. Aabaha ilmaha dhalay oo la la’ yahay - Kani waa aabe:
Aysan hooyada isqabin kolkii uu ilmahu dhalanayey ama uu calool galayey
Aan lagu qoran warqada dhalashada ee ilmaha
Aan ilmaha shaqo ku lahayn
Aan ilmaha wax tarin iminka,
Aan lagu diiwaan gelin diiwaanka ilmo korsiga ee aabaha
8. La dayacay dowladuna meel gaysay - Tan macnaheedu waa ilmahaaga dowladdu waxa ay ku meelaysay meel kale gurigaagana ma ay imaan karaan waayo wax kama aadan qaban dhibaatooyinkii ama ma aadan isticmaalin khayraadyadii lagu siiyey adiga.
Sidoo kale macnaheedu waxa uu noqon karaa in aadan booqan doonin ama aadan dhaqaale ahaan gargaari doonin inta ay joogaan meesha dowladu gaysay.
9. Ku helida dambiyo cul-culus - Hadii lagugu helay dambi ah inaad dishay ama aad gacanqaad xun u geysatay ama fara-xumaysay ilmo.
Xaquuqdayda ma la iiga xayuubin karaa uun sabab ah in noloshaydu hadda ay adag tahay?
Xaquuqdaada lagaagama xayuubin karo uun sabab ah in aadan dhaqaale ahaan iyo korin ahaanba aadan u daryeeli karin ilmahaaga. Taa macnaheedu waa naafa ahaanta, hoy la’aanta ama sabool ahaantu ma aha sababo fiican oo lagu xayuubiyo xaquuqdaada. Hawl-wadeenada bulshada ayaa kaala shaqeyn kara adiga inaad hesho khayraadyo ku caawiya.
Ka waran hadii aan xabsi ku jiro?
Xabsi ku jiridu ma aha sabab fiican oo lagu joojin kara xaquuqdaada. LAAKIIN, waa la eegi karaa iyada iyo waxyaabo kale si loo cadeeyo inaadan qayb ka ahayn nolosha ilmahaaga. Waa muhiim inaad intii aad awoodo aad xiriiriso ilmahaaga si aad isaga ilaaliso inaad waydo xaquuqdaada. Meel dhigo nuqulada warqadaha aad u dirto ilmaha meelna ku qoro wicitaanada iyo booqashooyinka ilmahaaga.
Ogow: Hadii lagugu helay dambiyada cul-culus qaarkood, waa inaad cadeyso inay tahay maslaxada ilmahaaga inay iyagu ku soo booqdaan adiga.
Ma u baahnahay qareen?
Amuurtani waa mid aad u culus. Runtii waa ra’yi wacan inaad hesho qareen. Waxa aad heli kartaa qareen lacag la’aan ah oo ay maxkamadu kuu magacowdo hadii aadan adigu awoodin inaad mid qabsato. Buuxi foom la yiraa “Dalbashada Magacaabida Qareen.” Waxa aad ka heli kartaa foomkan maxkamada deegaankaaga ku taal.
Hubi sidoo kale inaad hesho foomka “Xaq u yeeladka Dhaqaalaha” si aad u cadeyso sababta aadan u bixin karin khidmada qareenka. Maxkamadaha qaarkood 2 da foomi waa ay wada socdaan. Foomkan kama aad heli kartid khadka (online) ka. Waxa aad tagi kartaa maxkamada, ama waa aad wici kartaa ama waxa aad u diri kartaa emayl maamulaha maxkamada si aad u waydiisato foomamka iyo tilmaamaha. Maxkamada ayey jirtaa inay go’aansato in aadan runtii awoodin inaad qareen qabsato iyo in kale, kolkaa hubi inaad tuso cadeyn fiican.
Ama waxa aad qabsan kartaa qareen adiga jeebkaaga ah.
Xaquuqdaydu ma ka duwan tahay kuwa dadka kale hadii aan ahay waalid “Ilmo Hindida” Mareykanka ah haysta?
Haddii ilmahaagu ay ka tirsan yihiin qabiil Hindida Mareykanka ah ama ay xaq u leeyihiin ka tirsanaan qabiil, kolkaa xeerarka ku saabsan xayuubintu waa ay ka duwan yihiin kuwa dadka kale waayo waxaa jira sharci la yiraa Sharciga Hagaaginta Ilmaha Hindida ah [Indian Child Welfare Act (ICWA)].
Sharciga (ICWA) waxa uu yiraa maxkamadu ma ay xayuubin karto xaquuqdaada waalid hadii uusan xiliga dhagaysiga dacwadaada uusan maxkamada xaadir ku ahayn wakiil qabiil ama uu soo xareeyey wakiilku Warqada Dhaarta Makhraatiga Sharciyeysan uuna ku raaco joojinta xaquuqda. Si uu u joojiyo xaquuqdaada waalidnimada, xaakimku waa khasab inay ka dhaadhacdo “shaki la’aan” in ogolaanshaha in ilmahu kula sii joogaan ay u “badan inay keento waxyeelo weyn oo jir ahaan iyo maskax ahaan u soo gaarta ilmaha.” Tan macnaheedu waa xaakimku kaama uu qaadi karo xaquuqdaada waalidnimo aan ka ahayn inay gabi ahaanba hubaan in u ogolaanta in ilmahu adiga kula sii joogaan ay waxyeelayso ilmahaaga. Eeg warqadayada xogta aruursan ee Xaquuqdaada sida uu Dhigayo Sharciga Hagaaginta Ilmaha Hindida ah, Your Rights Under the Indian Child Welfare Act.
Wixii kale ee akhbaar ah kala xiriir Rugta Sharciga ICWA (ICWA Law Center) ee khadkeedu yahay 1-866-879-0123 ama booqo shabakadooda (website) ah http://www.icwlc.org.
Ilmahayga ayaa la iga kaxaysay. Goorma eyey degmadu isku dayi kartaa inay iga xayuubiso xaquuqdayda waalid?
Badanaa degmadu waa khasab inay kuugu baaqdo adeegyo si ay kaaga caawiso adigu inaad wax ka qabato arrimaha dhaliyey in ilmaha meel kale lagu meeleeyo. Xaakimka iyo hawl-wadeenka degmadu, waxaa dhici karta inay arrintaa ugu yeeraan “Sameynta dadaal macquul ah” ama kiisaska uu quseeyo sharciga hagaaginta Ilmaha Hindida ah “sameynta dadaalo firfircoon.”
Hadii ilmahaaga lagaa kaxaysto, maxkamadu waa khasab inay ku qabato dacwo dhagaysi dib u eegida arrinta ah 90-cisho gudahood. Dhagaysiga dacwadani waxa uu ku saabsan yahay in dib loo eego horukaca aad ka sameysay qorshaha kiiskaaga loo dajiyey.
Laakiin, hadii aad wali ka shaqeynaysay qorshaha kiiskaaga aadna booqanaysay ilmahaaga, maxkamadu waxa ay ku siin kartaa 6-bilood oo kale si aad ugu soo dhamaystirto qorshahaaga kiiska ka hor dhagaysiga dacwada. Dacwada dhagaysigeeda ka dib, maxkamadu waxaa dhici karta inay amaro degmadu inay soo xareysato arjiga rasmiga ah.
Kolkii ilmahu uu joogo meesha la geeyey 12-bilood, kolkaa degmaddu waxa ay xareysan kartaa arji ay ku waydiinayso maxkamadu inay go’aansato meesha uu ilmahaaagu uu ku sii noolaan doono hadii uusan ku soo noqon karin guriga. Waxyaabahaa “rasmiga’ ah ee la kala dooran karo kuli waa xayuubino xaquuqda waalidnimada si kolkaa uu xor ugu noqdo ilmahu korsi cid kale, ku wareejin haysashada sharciga ah ee ilmaha qof ehel ah ama ku wareejinta mas’uuliyada iyo haysashada sharciga ah ee ilmaha Waaxda Adeegyada Bulshada (Human Services).
Marmarka qaarkood, sida kolka xaqaagii waalid ee ilmo hore si aan akhtiyaar ahayn lagaa qaaday ma aad waxyeelo weyn oo culus aad u gaysatay ilmahaaga, kolkaa degmadda khasab kuma aha inay sameyso (dadaal) ama (firfircooni) macquul ah si ay ilmaha ugu soo celiso gacantaada. Waxa ay xareysan karaan arji degdeg ah markiiba.
Xeerar kale ayaa quseeya kolka ilmo uu waalid meel geeyo si uu uga helo daryeel iyo dabiibid.
Hadii aan ogolaato in ilmahayga meel kale loo geeyo daryeelid, xaquuqdayda waalidnimo wali miyaa la iga qaadi?
Haa, laakiin waa inay noqotaa mid ka mid ah sababaha sharciga ah ee kor ku xusan. Hadii aad ogolaato in ilmahaaga meel kale la geeyo si looga daaweeyo naafanimo, uuna ilmahu meeshaa daryeel u sii joogo 13-bilood laga bilaabo maalinta heshiiska ilmaha kaxaysiga akhtiyaarka ah ama lagu meeleeyey 15 bilood oo ka mid ah mudaddii 22 bilood ee la soo dhaafay, hay’adu kolkaa waa khasab:
inay ilmaha gacantaada ku soo celiso
ay go’aansato inay jiraan sababo macquul ah oo loo sii wadi meelaynta ikhtiyaarka ah ayna waydiisato xaakim inuu ansaxiyo g’aankaa ama
ay xareysato arji ay kaaga xayuubinayso xaquuqdaada waalidnimo
Maxkamadu waa khasab inay dacwo dhagaysi sameyso si ay u go’aamiso meesha uu ilmahaagu ku noolaan doono iyo inay dhici karto:
In ay ilmaha gacantaada ku soo celiso
In ay ansaxiso sii wadida meelaynta ikhtiyaarka ah ama
In ay go’aamiso in sii wadida meelaynta ikhtiyaarka ahi aysan ahayn maslaxada ilmahaaga ayna farto degmaddu in ay xareysato arji loogu doonayo rasmiyeyn ilmahaaga. “Rasmiyeyntu waxa ay noqon kartaa xayuubinta xaquuqda waalidnimada si kolkaa uu xor ugu noqdo ilmahu korsi cid kale; ku wareejin haysashada sharciga ah ee ilmaha qof ehel ah ama ku wareejinta mas’uuliyada iyo haysashada sharciga ah ee ilmaha Waaxda Adeegyada Bulshada (Human Services).
Maxaan sameyn karaa si aan isaga ilaaliyo in aan xaquuqdayda waalid la iga xayuubin?
hadii ilmahaaga lagaa kaxeysto ama kiis (CHIPS) ah la xareystay, walina aan la sameyn codsi ah xaquuq xayuubin, waxa ugu roon ee kolkaa aad sameyn kartaa waa inaad u hogaansanto qorshaha kiiskaaga. Hadii aadan fahmin waxa lagaa rabo inaad sameyso, waydiiso qareenkaaga ama hawl-wadeenka kiiskaaga ku shaqada leh inay kuu sharxaan. Kala shaqee hay’ada adeegyada bulshada inaad hesho adeegyada aad u baahan tahay si aad u haysato ilmahaaga ama aad ula soo noqoto ilmahaaga si dhaqso leh.
Hadii arji lagu joojinayo xaquuqdaada jaa la xareeyey, kala shaqee qareenkaaga si aad maxkamada u tuso in sii haysiga xaquuqdaada waalidku uu tahay wax dani ugu jirto ilmahaaga. Tus maxkamada inaad aad iyo aad ugu dadaalayso inaad sameyso waxa walba oo dani ugu jirto ilmahaaga. Tus waxa aad sameynayso si aad wax uga qabato dhibka jira.
Hadii ay u badan tahay in maxkamadu ay kaa xayuubin doonto xaquuqdaada waalidnimo, waxa aad waydiisan kartaa maxkamada intii ay taa sameyn lahayd inay si rasmi ugu wareejiiso haynta iyo korinta sharciga ah ee ilmaha saaxiib, qof ehel ah ama qoys kale oo ilmaha haya.
Wareejinta haynta ilmahu waxa ay kuu ogolaataa inaad sii haysato xaquuqdaada waalid adigoo isla markaana hubinayo in ilmahaagu ay helaan goob rasmi ah oo ay ku noolaadaan. Ilmahaagu adiga kulama ay noolaanayaan, qof kale ayaana u gaaraya go’aanada muhiimka iyaga, laakiin, wali waxa aad awoodi inaad aragto aadna la hadasho iyaga hadii qofka hayaa uu yiraa waa hagaag kuwaasi ama hadii ay maxkamadu amarto waqti booqasho waalid ah. Maxakamadu waxa ay amri kartaa booqashooyin kormeerid wata oo ilmaha iyo waalidka booqanayaa aysan isku cidlaysan.
Xataa haddii aad haysato qorshe maxkamadi amartay, qofka ilmaha hayaa waa uu kaa hor istaagi karaa inaad aragto iyaga hadii aad sarkhaan tahay, ama moondooriye aad soo isticmaashay ama aad u dhaqmayso si khatar ah kolka aad timaado guriga.
Maxkamadu waa ay bedeli kartaa qorshaha booqashada hadii waxyaabo noloshaada ka mid ahi ay isbedelaan. Waxa ay go’aansan kartaa inaad la qaadato waqti badan ama waqto yar ilmahaaga.
Hadii qofka ilma hayaa uusan si fiican u daryeelayn, aadna noloshaada iyo deegaankaaguba ay yare xasiloon yihiin, waxa aad tagi kartaa maxkamad waxa aadna waydiisan kartaa in haynta ilmahaaga laguu soo celiyo. Xaakimka ayaa go’aansan cidda haynaysa ilmaha iyadoo ku salaysan waxa xaakimku uu u malaynayo inay tahay maslaxada ilmahaaga.
Ma aan ka qaadi karaa xaquuqda waalidka kale ee ilmaha?
Uma badna maya. Maxkamadahu badanaa waxa ay aaminsan yihiin in ilmahu ay lahaadaan 2 waalid mana doonayaan inay ka qaadaan xaquudda waalidnimada mid ka mid ah labada waalid aan ka ahayn kolka ay jirto sabab aad macquul u ah. Arrintani waa ay jirtaa xataa hadii labada waalid ay heshiis ku yihiin qaadida xaquuqda.
Waa muhiim in la xusuusnaado in xayuubinta xaquuqda waalidku sidoo kale ay joojinayso dhamaan wixii waajib masaariif ilmood ahaa oo dhan.
Inta badan sababta kaliya ee lagu joojiyo xuquuqda waalid kale ee ilmahu waa hadii qofka aad hadda isqabtaani uu doonayo inuu ilmaha asagu korsado. Hadii waalidka kale ee ilmahu uu ogolaado korsiga ilmaha uu korsan qofka aad isqabtaani, waxa aad ka xareysan kartaa arji Maxkamada kurayda ee deegaanka si aad ugu waydiisato maxkamadu inay joojiso xaquuqdii waalidka kale ayna u ogolaato in xilahaagu uu u korsado ilmaha isagu. Waalidka kale ee ilmahaagu waxa uu u baahan yahay inuu ku bixiyo ogolaanshahiisa arrintan qoraal ahaan.
Laakiin taasi ma aha wax suurtagal ah hadii:
Hadii aadan dib u guursan ama
Aad guursatay uusana xilahaagu doonayn inuu korsado ilmaha, ama
Waalidka kale uusan ogolaan joojinta waalidnimada ilmaha, ama
Adiga iyo ilmahaagu aad wuxuun manfacyo dowladeed ah aad heshaan. Ka qaadida waalid xaquuqda waalidnimadu waxay kaloo ka qaadaa waajibkoodii ahaa inay gargaaraan ilmaha. Hadii ay suurtagl tahay inay wuxuun kaalmo ah ay u awoodi karaan ilmaha, kolkaa dowladdu ma ay rabto inay dhamaato xaquuqdooda waalidku, hadii taa macnaheedu yahay in adiga ama ilmahu aad u baahan tihiin manfacyo dowladeed.
Hadii aad qabto in ilmahaagu aysan amaan ku ahayn la joogida waalidka kale, tag Maxkamada Qoyska, ka dibna waydiiso amar bedelaya ama xadidaya waqtiga waalidka kale ilmaha uu haysanayo. Waxaad kaloo waydiisan kartaa booqashooyinka kormeerka leh. Wixii kale ee akhbaar ah ee ku saabsan amarada waqtiga waalidka, ka eeg warqada xogta aruursan ee Waqtiga Waalidka (Booqashada) iyo Qorshayaasha waalidka
Ka Waran hadii xaquuqdaydii hadda la xayuubiyey?
Waxa aad ka qaadan kartaa racfaan go’aanka maxkamada. Racfaanku waa waydiisiga in xaakim go’aankiisa ay dib u eegto maxkamad isaga ka sareeysa, Racfaanka waxaa loo baahan yahay in lagu sameeyo 20-cisho gudahood oo ka bilaabi maalinta amarka la soo saaray.
Wixii kale ee akhbaar ah ee ku saabsan sida loo xareysto racfaan waxa laga heli karaa shabakada (website) Maxkamada Racfaanada ee http://www.mncourts.gov/CourtOfAppeals.aspx. Riix badhanka “Mawduucyada Caawinta ee Maxkamada Racfaanka” (“Court of Appeals Help Topics”).
Kiisaska qaarkood ee ilmaha roonroon, degmadu waxa ay waydiisan kartaa maxkamada si dib loo soo celiyo xaquuqdii waalidka. Eeg warqada xogta aruursan ee Waligay Guriga mar Kale ma ku noqon karaa Hadii Waalidkay Xaquuqdii laga Qaaday?
Dib ma u soo ceshan karaa xaquuqdaydii waalid ka dib kolkii la iga qaaday?
Waxaa laga yaabaa inaad dib u soo ceshan karto xaquuqdaadii waalid marmarka qaarkood.
Ka hor inta aadan bilaabin hawsha dib u soo celinta xaquuqdaadii waalid ee lagaa qaaday, waa khasab in:
Aad horey ugu lahayd xaquuq waalid ilmahaaga uu amarkii hore ee maxkamadu uu kaa qaaday xaquuqdiisa sida uu dhigayo sharciga (Minnesota Statutes, section 260C.317)
Aad wax ka qabatay waxyaabihii kalifay xaq qaadida markii horeba
Aad diyaar u tahay aadna awoodo inaad siiso daryeelka maalin walba ah ilmahaaga, aadna ilaaliso caafimaadkooda, amaankooda, iyo hagaagsanaantooda.
Si xaquuqdaadii waalid dib loogu soo celiyo, ilmahoodu waa khasab inuu:
Uu ku jiray goobaha ilmaha dowladu gayso ugu yaraan 48-bilood ka dib kolkii ay maxkamadu soo saartay amarka joojinayey xaquuqda waalidka
Aan korsi loo qaadan (ka eeg xiriirka hoose ee MN DHS wixii akhbaar ah ee khaas ah ee ku saabsan shuruudan)
Aan ku jirin heshiis qoran oo ah ku meelayn ilmaha cid korsata
Dib u soo celinta xaquuqda waalidka ee la qaaday LAMA ogola hadii:
Waalidka xaquuqdooda horey loo joojiyey iyadoo joojintaa lagu saleeyey go’aan sharci oo ahaa tacadi galmada ah, fal kale oo keenay geerida ilmo yar
lagu helay wax dambi ah oo ku jira liiska MN ee qaybta qodobada sharciga ah ee (260C.007, subdivision 14). Gal shabakada www.revisor.mn.gov/statutes/ ka dibna geli taa meesha waxa la baarayo lagu qoro.
Hadii aad isku dayeyso inaad dib u soo ceshato xuquuqdaadii waalidnimo, waxa aad u baahan tahay inaad ogaysiiso hay’ada adeega bulshada ee ilmahaaga. Waxa aad u baahan tahay inaad isticmaasho foomka Waaxda Adeega Bulshada (Department of Human Services) ee DHS-7949-ENG, ugu yaraan 45-cisho ka hor inta aadan xareyn arji.
Si aad u hesho foomkan gal shabakada https://mn.gov/dhs/.
Meesha “Sidee ayaan” (“How do I?”) ee baarida ka dooro “eDocs iyo foomamka (“eDocs and forms”)
Geli “DHS-7949-ENG” meesha wax laga baaro
Arjigu sidoo kale waa inuu ka soo baxaa shuruudaha ku xusan Qodobka Sharciga ah ee Minnesota ee 206DC.329 (Minnesota Statute 206DC.329)
Tani waa arrin adag oo ay KHASAB TAHAY IN LOO SAMEEYO SI SAX AH. Waxaa roon in lala tashado qareen ka hor inta aan la isku dayin dib u soo celinta xaquuqda waalidka hadii xaquuqdaa lagaa qaaday.